Sunday July 12, 2020 - 12:59:05 in Wararka by Super Admin
Aqoon yahan aanan magaciisa xasuusan baa yiri haday dadka tirada badani garanayaan sida bangiyadu u shaqeeyaan bariba mudaaharadaad baa dhici lahaa. Million kasoo qalinjabiyey khaasatan dhaqaalaha boqolkiiba toban xitaa ma fahmi karto sida bangiya
Axmed Nuur Jimcaale waxa dad badan cilmi qayb ku ah buu iskaga damaashaadayaa.
Qof walba warqada uu soo shaqeeyo oo kusoo dhidido Axmed buu u keenayaa oo meel iska fadhiya. Axmed intuu saa u eego buu warqadu number ka ay wadato computer ku daabacaa, dabadeed ayadoo fariina qofka mobil kiisa ugu diraa. Numberka uu fariinta ka dhigay, damaanad ma leh. Wax lacaga oo meel ka yaal ma jiro. Kaliya numberkaasi wuxuu dhalanayaa marka adigu aad boqol dollar u keento. Dhididi mayo, oo socon mayo. Warqadaada un buu sugayaa lacagta ah.
Halkaa kuma harin Axmed. Waraaqihii lacageed inta aruursaday buu aduunka la aaday, inta Jabuuti u fariistay. Adigu numberka Jimcaale ku siiyey xageed la aadi, sow idinku iskula wareega ma aha dalka gudihiisa?
Halkaasi ma celin Axmed. Maadaama adigu aadan number Brazil sokor kaga soo gadan karin, asagaa waraaqihii dollarka Brazil la aaday oo sokor kusoo iibsaday. Wuxuu galay shay walba oo ganacsade yar hayey.
Wuxuu afka qabsaday taleefankii oo xukun millitry dictator ka dhigtay. Qofkii afkaa kala fura lacag yar baa mobil loogu dirayaa dilaa. Taleefanka lagu wada hadlay cid ma record garayn karto oo asagaa leh, lacagta dilkaaga meel ay martay iyo boorso la iskugu qaaday ma jirto.
Axmed Jimcaale halaaga uu hayo haday dadku fahmi lahaayeen cidi-cidi bay ula bixi lahaayeen hal subax.
Haday diini moral qof ku qaban karto Axmed oo laba diblaysan baa subax la arki lahaa. Maya, laakin cid ma qaban karto diini, ee iyadaa lagu adeegtaa.